“Waan hubaa in Man United ay mar uun ku soo laaban doonto maalmihii Sir Alex Ferguson” – Sanchez – Gool FM
Arsenal iyo Man United oo ka mid ah Kooxaha caawa ciyaari doona tartanka Europa League … (Ka bogo guud ahaan ciyaaraha dhacaya)
Man City oo guul ay ka gaartay Dinamo Zagreb ku soo xiratay heerka group-yada tartanka UCL, xilli uu Jesus saddeley dhaliyay…+SAWIRRO
Shaxda rasmiga ah kulanka kooxaha Bayer Leverkusen Iyo Juventus ee tartanka Champions League oo la shaaciyey
Shaxda rasmiga ah kulanka kooxaha Club Brugge Iyo Real Madrid ee tartanka Champions League oo la shaaciyey
Shaxda rasmiga ah kulanka kooxaha Dinamo Zagreb Iyo Man City ee tartanka Champions League oo la shaaciyey
Tammy Abraham oo sheegay kooxda uu doonayo inay ku wajahaan wareega 16-ka ee tartanka Champions League
“McTominay waa ciyaariyahanka ugu fiican Manchester United, taasina aniga ayaa sabab u ah”
Barcelona oo u sheegtay Man City qiimaha ay ku iibiseyso xiddigeeda…
“Waan hubaa in Man United ay mar uun ku soo laaban doonto maalmihii Sir Alex Ferguson” – Sanchez
Dajiye May 13, 2019
(England) 13 Maajo 2019. Alexis Sanchez ayaa ka raali galiyay taageerayaasha kooxda Manchester United xili ciyaareedkii niyadjabka ahaa ay soo qaateen, isaga iyo kooxdaba.
Manchester United ayaa xilli ciyaareedkan ku dhameysatay guul darro 2-0 ah oo ay kasoo gaartay kooxda Cardiff, iyagoo kaalinta lixaad kaga dhameystay dhanka kala sareynta horyaalka Premier League.
Hadaba sida laga soo xigtay “Daily Mail” ee dalka England, Alexis Sanchez ayaa wuxuu ku soo qoray boggiisa rasmiga ah ee Twitter-ka, fariin uu ku raali galinayo taageerayaasha kooxda Manchester United wuxuuna yiri:
“Wuuu ahaa xili ciyaareed aad u adag, taageerayaasha waa kuwo u qalma in raali galin loo diro, sababtoo ah waxay had iyo jeer nagu garab taagnaayeen wax walba ee dhaca”.
“Shakhsi ahaan, ma sameynin sida aan filayay, sababa la xiriira dhaawacyo lama filaan ah ee aan la kulmay, saxaafada iyo dadku waxay ku falanqeeyeen arintan waxyaabo aan run ahayn, mar walba waxaan xirfadle ka ahaa dhinac walba”.
“Waxaan ka raali galinayaa taageerayaasha, inaan gaari weynay bar-tilmaameedyadeena, laakiin waxaan nahay Manchester United, ciyaartoyda iyo shaqaalaha tababaraha waxay is weydiinayaan hadii aan qaban karno shaqo sax ah oo aan sameyn karno wax walba ee awoodeenu gaarsiisan tahay, lakiin waan hubaa in kooxdu ay maalin uun ku soo laaban doonto maalmihii Sir Alex Ferguson”.
Wanda Nara oo si cad u sheegtay in xidigaha Icardi iyo Ronaldo ay hal koox ka wada ciyaari karaan
“Manchester City waxay uqalmaan ku guuleysiga horyaalka” - Virgil van Dijk